Bolivia: Iza no Homena Tsiny Amin’ny Orana? · Global Voices teny Malagasy
Bolivia: Iza no Homena Tsiny Amin'ny Orana?
Voadika ny 17 Aogositra 2017 2:34 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny Martsa 2007)
Ny EL Niño na ny Tandrefana omena tsiny amin'izany. Na ahoana na ahoana, iharan'ny oram-batravatra sy tondradrano aterak'izany ny betsaka amin'ny faritra atsinanan'i Bolivia, izay nitarika fisianà tsy aman-kialofana an'aliny maro sy nitera-pahavoazana tafakatra hatraminà an-tapitrisa dolara maro. Nadika araka ny fijery politika ny fandraisana anadraikitra, na tsy fisian'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakàna, noho ny fahitàna fa tsy iray tsy roa no manontany tena ny antony tsy nanambaràn'ny governemantan'i Evo Morales avy hatrany ny fisianà loza voajanahary mahatsiravina manjo ny firenena. Ny fanehoankevitr'ireo sisa rehetra eo amin'ny firenena dia naneho fitserana an'ireo mpiray tanindrazana amin'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fanangonana vola an'hetsiny maro.
Araka ny tatitra ofisialy, ny hadirin'ny orana be loatra no niteraka ilay toejavatra tantatra amin'ny anarana hoe « El Niño » (ilauy zaza), saingy fanontaniana tamin'ny teny mahery napetraky ny filoha Morales ny hoe sao mba tomponandraikitra mivantana amin'izao zavatra hafahafa sy toetrandro mamono olona izao ireo firenena tandrefana. Jim Shultz avy amin'ny bilaogy Democracy Center milaza hoe tsara petraka tokoa ny fanontanian'i Morales, raha toa i Bolivia manohana hoe ireo firenena manana indostria maro no mety mahatonga ireny vokatry ny fiovàna toetrandro ireny. Federico Fuentes miresaka ihany koa io adihevitra tsy mitsahatra io ao amin'ny bilaoginy Bolivia Rising, izay namerina namoaka ny lahatsorany efa nivoaka tao amin'ny Green Left Online.
Any amin'ny departemantan'i Beni, marobe no niandry ny hamambaràna ny maha-latsaka an-katerena ny firenena, saingy niandry vasoka izy ireny raha ny fahitàna azy. Tsy azon'i Andrés Pucci mihitsy izay tsy maharototra ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny eny Ambanivohitra, Susana Rivero, izay nanamarika fa rehefa misy tranganà tsunami ihany vao ambara ny fisiana hamehana tahàka izany. Nihevitra i Pucci fa tena kidaladala ilay fanehoankevitra, indrindra fa firenena anaty tany tsy manana morontsiraka i Bolivia. Andro vitsy taty aoriana, nanapaka hevitra ny fanjakàna ny hanambara ny maha-latsaka an-katerena ny firenena ho an'ireo faritany telo tena voadona mafy. Mpandalina vitsivitsy no milaza fa ilay fanapahankevitra tsy hanambara ny fisianà fahalatsahana an-katerena dia misy ifandraisany betsaka amin'ìlay dingana mitohy ho fanavaozana ny eny ambanivohitra fa tsy dia izay fahatsapàn'ny governemanta loatra ny atao hoe loza voajanahary. Arka ny lalàna fanavaozana ny eny ambanivohitra (INRA), ireo tany rehetra iharan'ny fanambaràna tahàka izany dia tsy azo ekena intsony ny hamerenana azy.
Bilaogy iray vaovao mitondra anarana hoe Déjà vu [ ES ], soratan'i Erick Sivila Flores, nanamafy hoe ny fandrakofana tanaty fampahalalam-baovao dia nampiasa tsy ara-drariny ilay loza mahatsiravina mba hanangonana vola ho amin'ny tombontsoany
Fa tena mampalahelo ihany koa ny mahita ireo olona vitsivitsy avy amin'ny fahitalavitra, manao ezaka fiantràna ataon'izy ireo, mampiseho ireo olona tradoza latsa-dranomaso. Mirefarefa… ary tsy tokony hitsofana mizika sy hivelesana amponga, sa tsy izany ?
Raha mameno ny fahitalavitra ireo sarin'ilay loza mahatsiravina, marobe amin'ireo Boliviana no naka ho ao am-pon'izy ireo ireny sary ireny ary dia nirotsaka taminìilay fanentanana “Firaisankina Bolivia,” izay nahavorina manodidina ny 3 tapitrisa Bolivianos (eo amin'ny 375.000 USD). Mauricio Aira sy ny bilaoginy vaovao Bolivie Primera Plana [ ES ] dia manasa ireo fikambanana rehetra ara-pinoana, politika, sosialy ary ara-barotra mba hanatevina laharana ilay hetska. Na teo aza ireo fanivaivàna retra sy ireo tsy firaharahiana teny anivon'ireo Boliviana to anatin'nu tontolo politika sy sosialy samy maka ho azy, miarahaba ireo mpiray tanindrazana aminy ilay bialogera tsy mitonona anarana Morir Antes Que Esclavos Vivir [ ES ], dia ireo izay nandray anjara tamin'ilay fanentanana ary manoratra izy hoe , “Arahabaina, ry Bolivia, izany no antsoina hoe Boliviana!” Carlos Hugo Quintanilla avy amin'ny Del Quintacho Su Rincón [ES] ihany koa dia nitehaka ireny fanehoana firaisankina ireny ary milaza fa io no manaporofo fa firenena iray i Bolivia.
Tamin'izany fotoana izany, tamin'ny taona lasa:
Na ny fitsidihan'ny Filoha Orogoaina, Tabaré Vazquez, na ny fitsidihana an'i Shily nataon'ny Filoha Morales, dia samy tafiditra ao anatin'ny ezak'i Bolivia hiditra sy hifandray amin'ireo firenena Amerikàna TAatsimo hafa mpiray vodirindrina aminy. Ny vesatry ny asa iantsorohan'i Morales nandritra ireo volana roa naha-teo amin'ny fitondràna azy dia mampiseho ihany koa ny tsy fisian'ny faniriany hikarakara ankohonana.
Fisaorana manokana no atolotra an'i Mario Duran tamin'ny bilaoginy Palabras Libres[ES] tamin'ny fametrahana ir rohy rehetra miasa atoanaty lahatsoratra.